အိမ် နား မှာ ရှိ တဲ့ သန့် ရှင်း ရေး ဝန် ထမ်း တွေ နဲ့ အ စောင့် တွေ အ တွက် အာ ဟာ ရ ဖြစ် စေ မည့် အ သား ဟင်း တွေ လှူ ဒါန်း ပေး ခဲ့ တဲ့ စီ နွန် - Real Gaming
အိမ် နား မှာ ရှိ တဲ့ သန့် ရှင်း ရေး ဝန် ထမ်း တွေ နဲ့ အ စောင့် တွေ အ တွက် အာ ဟာ ရ ဖြစ် စေ မည့် အ သား ဟင်း တွေ လှူ ဒါန်း ပေး ခဲ့ တဲ့ စီ နွန်
စီ နွန် က တော့ ဖိ လစ် ပိုင် နိုင် ငံ က မော် ဒယ်လ် တစ် ယောက် ဖြစ် ပြီး မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ အ နု ပ ညာ အ လုပ် တွေ ကို လာ ရောက် လုပ် ကိုင် နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
နိုင် ငံ ခြား သား တစ် ယောက် ဖြစ် ပေ မယ့် လည်း မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ ရှိ တဲ့ ဆင်း ရဲ့ ချို့ တည့် သူ တွေ နဲ့ အ မှန် လို အပ် နေ တဲ့ နေ ရာ တွေ မှာ တတ် နိုင် သ လောက် မ ကြာ ခ ဏ ဆို သ လို အ လှူ အ တန်း တွေ ပြု လုပ် ပေး လေ့ ရှိ ပါ တယ် ။
ဒီ နေ့ မှာ လည်း သူ က အိမ် နား မှာ ရှိ တဲ့ သန့် ရှင်း ရေး ဝန် ထမ်း တွေ နဲ့ အိမ် နား မှာ ရှိ တဲ့ အ စောင့် တွေ အ တွက် အိမ် ပြန် ရောက် တဲ့ အ ခါ ချက် ပြုတ် စား သောက် နိုင် ရန် အာ ဟာ ရ ဖြစ် စေ ရန် လတ် ဆတ် တဲ့ အ မဲ သား ( စိမ်း ) တွေ ကို ကိုယ် တိုင် ပြင် ဆင် ပြီး လှူ ဒါန်း ပေး ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
အ ဆို ပါ အ လှူ နဲ့ ပတ် သက် ပြီး တော့ ” ဒီ နေ့ ကျွန် တော် က ကျွန် တော့် အိမ် နား မှာ ရှိ တဲ့ သန့်ရှင်း ရေး ဝန် ထမ်း တွေ အိမ် နား မှာ ရှိ တဲ့ အ စောင့် တွေ အ တွက် လတ် ဆတ် တဲ့ အ မဲ သား ( စိမ်း ) တွေ ပေး ဖို့ ပြင် ဆင် နေ ပါ တယ် ခင် ဗျ ။ သူ တို့ တစ် နေ ကုန် အ လုပ် လုပ် ပြီး ပင် ပန်း လို့ အိမ် ပြန် ရောက် တဲ့ အ ခါ ချက် ပြုတ် စား သောက် နိုင် လို့ ပါ ခင် ဗျ ။ ဂ ရု စိုက် မှု အ သေး အ မွှား လေး က အ စ ကျွန် တော် တို့ နေ ထိုင် ရာ ပတ် ဝန်း ကျင် လေး ကို သာ ယာ စေ နိုင် ပါ တယ် ။ နောက် ဆုံး တော့ ကျွန် နော် သန့် ရှင်း ဝန် ထမ်း တွေ နဲ့ တွေ့ ခဲ့ ပြီး လတ် ဆတ် တဲ့ အ မဲ သား တွေ ပေး ခဲ့ ပါ ပြီ ။ သူ တို့ ဒီ ည ချက် စား ကြ လိမ့် မယ် လို့ ကျွန် တော် ထင် ပါ တယ် ။ ကျွန် တော် အ ရမ်း ပျော် တယ် ” ဆို ပြီး အ လှူ ပုံ ရိပ် လေး တွေ နဲ့ အ တူ ဝမ်း သာ ပီ တိ ဖြစ် နေ ကြောင်း စီ နွန် က ရေး သား ဖော် ပြ ထား ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ပ ရိ သတ် ကြီး ရေ နိုင် ငံ ခြား သား တစ် ယောက် ဖြစ် ပေ မယ့် အ လှူ အ တန်း ပြု လုပ် တဲ့ နေ ရာ မှာ ရက် ရော တဲ့ စီ နွန် ရဲ့ အ လှူ အ တွက် သာ ဓု ခေါ် ခဲ့ ကြ ပါ ဦး နော် ။
အိမျ နား မှာ ရှိ တဲ့ သနျ့ ရှငျး ရေး ဝနျ ထမျး တှေ နဲ့ အ စောငျ့ တှေ အ တှကျ အာ ဟာ ရ ဖွဈ စေ မညျ့ အ သား ဟငျး တှေ လှူ ဒါနျး ပေး ခဲ့ တဲ့ စီ နှနျ
စီ နှနျ က တော့ ဖိ လဈ ပိုငျ နိုငျ ငံ က မျော ဒယျလျ တဈ ယောကျ ဖွဈ ပွီး မွနျ မာ နိုငျ ငံ မှာ အ နု ပ ညာ အ လုပျ တှေ ကို လာ ရောကျ လုပျ ကိုငျ နေ တာ ဖွဈ ပါ တယျ ။
နိုငျ ငံ ခွား သား တဈ ယောကျ ဖွဈ ပေ မယျ့ လညျး မွနျ မာ နိုငျ ငံ မှာ ရှိ တဲ့ ဆငျး ရဲ့ ခြို့ တညျ့ သူ တှေ နဲ့ အ မှနျ လို အပျ နေ တဲ့ နေ ရာ တှေ မှာ တတျ နိုငျ သ လောကျ မ ကွာ ခ ဏ ဆို သ လို အ လှူ အ တနျး တှေ ပွု လုပျ ပေး လေ့ ရှိ ပါ တယျ ။
ဒီ နေ့ မှာ လညျး သူ က အိမျ နား မှာ ရှိ တဲ့ သနျ့ ရှငျး ရေး ဝနျ ထမျး တှေ နဲ့ အိမျ နား မှာ ရှိ တဲ့ အ စောငျ့ တှေ အ တှကျ အိမျ ပွနျ ရောကျ တဲ့ အ ခါ ခကျြ ပွုတျ စား သောကျ နိုငျ ရနျ အာ ဟာ ရ ဖွဈ စေ ရနျ လတျ ဆတျ တဲ့ အ မဲ သား ( စိမျး ) တှေ ကို ကိုယျ တိုငျ ပွငျ ဆငျ ပွီး လှူ ဒါနျး ပေး ခဲ့ တာ ဖွဈ ပါ တယျ ။
အ ဆို ပါ အ လှူ နဲ့ ပတျ သကျ ပွီး တော့ ” ဒီ နေ့ ကြှနျ တျော က ကြှနျ တေျာ့ အိမျ နား မှာ ရှိ တဲ့ သနျ့ရှငျး ရေး ဝနျ ထမျး တှေ အိမျ နား မှာ ရှိ တဲ့ အ စောငျ့ တှေ အ တှကျ လတျ ဆတျ တဲ့ အ မဲ သား ( စိမျး ) တှေ ပေး ဖို့ပွငျ ဆငျ နေ ပါ တယျ ခငျ ဗြ ။ သူ တို့ တဈ နေ ကုနျ အ လုပျ လုပျ ပွီး ပငျ ပနျး လို့ အိမျ ပွနျ ရောကျ တဲ့ အ ခါ ခကျြ ပွုတျ စား သောကျ နိုငျ လို့ ပါ ခငျ ဗြ ။ ဂ ရု စိုကျ မှု အ သေး အ မှား လေး က အ စ ကြှနျ တျော တို့ နေ ထိုငျ ရာ ပတျ ဝနျး ကငျြ လေး ကို သာ ယာ စေ နိုငျ ပါ တယျ ။ နောကျ ဆုံး တော့ ကြှနျ နျော သနျ့ ရှငျး ဝနျ ထမျး တှေ နဲ့ တှေ့ ခဲ့ ပွီး လတျ ဆတျ တဲ့ အ မဲ သား တှေ ပေး ခဲ့ ပါ ပွီ ။ သူ တို့ ဒီ ည ခကျြ စား ကွ လိမျ့ မယျ လို့ ကြှနျ တျော ထငျ ပါ တယျ ။ ကြှနျ တျော အ ရမျး ပြျော တယျ ” ဆို ပွီး အ လှူ ပုံ ရိပျ လေး တှေ နဲ့ အ တူ ဝမျး သာ ပီ တိ ဖွဈ နေ ကွောငျး စီ နှနျ က ရေး သား ဖျော ပွ ထား ခဲ့ တာ ဖွဈ ပါ တယျ ။
ပ ရိ သတျ ကွီး ရေ နိုငျ ငံ ခွား သား တဈ ယောကျ ဖွဈ ပေ မယျ့ အ လှူ အ တနျး ပွု လုပျ တဲ့ နေ ရာ မှာ ရကျ ရော တဲ့ စီ နှနျ ရဲ့ အ လှူ အ တှကျ သာ ဓု ချေါ ခဲ့ ကွ ပါ ဦး နျော ။
လမ်း မှာ တွေ့ ရင် တောင် လာ မ နှုတ် ဆက် ပါ နဲ့ လို့ ယုန် လေး ကို ဒဲ့ ပြော လာ တဲ့ စ မိုင်းလ်
လမ်း မှာ တွေ့ ရင် တောင် လာ မ နှုတ် ဆက် ပါ နဲ့ လို့ ယုန် လေး ကို ဒဲ့ ပြော လာ တဲ့ စ မိုင်းလ် သ ရုပ် ဆောင် ၊ အ ဆို တော် ၊ ဒါ ရိုက် တာ ယုန် လေး က တော့ လက် ရှိ မှာ သူ့ ရဲ့ ” ငါ တို့ အား လုံး ရဲ့ မြေ ” သီ …
နင် ရယ် ငါ ရယ် ၆ ၆ ဃ ကြီး ရယ် ရဲ စ ခန်း နဲ့ တ ရား ရုံး မှာ တွေ့ ကြ မယ် လို့ ကြိမ်း ဝါး လိုက် တဲ့ သံ သာ မိုး သိမ့်
နင် ရယ် ငါ ရယ် ၆ ၆ ဃ ကြီး ရယ် ရဲ စ ခန်း နဲ့ တ ရား ရုံး မှာ တွေ့ ကြ မယ် လို့ ကြိမ်း ဝါး လိုက် တဲ့ သံ သာ မိုး သိမ့် M R T V –4ရုပ် သံ ဇာတ် လမ်း တွဲ နှစ် သက် ကြ သူ တိုင်း M R T V – …
အ ဆင်း ဘီး တပ် ပေး သူ တွေ ကြား မှာ မိတ် ဆွေ အ တု အ စစ် ကို သိ ခွင့် ရ လိမ့် မယ် ဆို တဲ့ ယုန် လေး
အ ဆင်း ဘီး တပ် ပေး သူ တွေ ကြား မှာ မိတ် ဆွေ အ တု အ စစ် ကို သိ ခွင့် ရ လိမ့် မယ် ဆို တဲ့ ယုန် လေး တော် တော် များ များ အ ဆင်း ဘီး တက် ပေး တဲ့ အ ချိန် မှာ မိတ် ဆွေ စစ် . အ တု သိ ခွင့် ရလိမ့် ပါ တယ် . …